Dagaalyahano katirsan Al-Shabaab oo isku dhiibay ciidamada Jubbaland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandDagaalyahano katirsan Al-Shabaab oo isku dhiibay ciidamada Jubbaland
Dagaalyahano katirsan Al-Shabaab oo isku dhiibay ciidamada Jubbaland
December 24, 2016 Puntland Mirror Jubaland, Somalia 0
Dagaalyahano katirsan Al-Shabaab oo isku dhiibay ciidamada Jubbaland. [Sawirka: Twitter]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan afar dagaalyahan oo Al-Shabaab ah ayaa isku dhiibay ciidamada Jubbaland, sida ay sheegeen saraakiisha maamulka Jubbaland.
Intii lagu guda jirey saddexdii sanno ee u dambeysay, ciidamada Jubbaland oo taageero ka helaya kuwa Kenya oo hoostaga AMISOM ayaa dagaal kula jiray dagaalyahanada Al-Shabaab si ay uga xoreeyaan gobolada Jubbooyinka.
Al-Shabaab aya Kismaayo laga saaray sanadkii 2012-kii, balse wali maleeshiyadu waxay joogaan deegaanada ku dhow magaalada.
October 30, 2016 Diyaarado dagaal oo looga shaki qabo kuwa Kenya oo duqeeyay saldhig ay Al-Shabaab ku leedahay gobolka Jubbada Dhexe
Al-Shabab fighters surrender to Jubaland state